घलेम्दी हाइड्रोको आइपिओमा २.६४ गुणा बढी आबेदन,एक जनालाई न्युनतम कति पर्ला ? – Taza Post
घलेम्दी हाइड्रोको आइपिओमा २.६४ गुणा बढी आबेदन,एक जनालाई न्युनतम कति पर्ला ?
घलेम्दी हाइड्रोको आईपिओ आबेदन गर्ने सबैले न्युनतम २० कित्ता शेयर पाउने निश्चित भएको छ । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक भिबोर क्यापिटलका अनुसार २.६४ गुणा बढी आबेदन परेको छ ।
कम्पनीको आइपिओमा ५४ हजार ८४३ आबेदनबाट ४१ लाख २२ हजार ४६० कित्ताको लागि आबेदन परेको बिक्री प्रबन्धक भिबोर क्यापिटलले जनाएको छ । आबेदनहरु प्रमाणिकरण गर्ने क्रममा रहेले यो आबेदन संख्यामा कमी आउन सक्ने बिक्री प्रबन्धक भिबोर क्यापिटल जनाएको छ ।
कूल एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको ५ मेगावाटको घलेम्दी जलविद्युत आयोजना म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा निमार्ण भइरहेको छ । नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणको काम सकेको उक्त आयोजनाले आगामी फागुनमा विद्युत उत्पादनको तयारी गरेको छ ।(source)
Previous आठौं दिनमा फर्कियो शेयरबजार,४५ अंकको गिरावटपछि साढे ६ अंकको सुधार
Next छिमेक लघुवित्तलाई लाभांश अस्वीकृत भएको कारण २४ घण्टाभित्र पेश गर्न नेप्सेको निर्देशन